राजा बीरेन्द्रको त्यो निशाना : एकै फायरमा झारल ठाउँको ठाउँ
श्रीमान श्रेष्ठ मङ्गलबार, कात्तिक १९ २०७६
कुरा वि.स. २०३६ साल माघ महिना हो । म मुस्ताङ जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी थिएँ । तत्कालिन राजा बीरेन्द्रबाट जिल्लाको भ्रमण हुने जानकारी आयो । भ्रमण भने झारलको शिकारमा केन्द्रीत थियो । यो कार्यक्रमका लागि तत्कालिन वनमन्त्री स्वर्गीय प्रकाशबहादुर सिंहले नक्सालस्थित थापा परिवारका एक जना शिकारीलाई सर्वेक्षण गर्न पठाएका थिए । तत्कालिन धौलागिरीका अंचलाधीश स्वर्गीय लक्ष्यबहादुर गुरुङबाट प्रहरी र दुई गाउँ पञ्चायत लेते र ताङलुङका प्रधानपञ्चहरु क्रमशः भिमप्रसाद गौचन र प्रेम गौचनलाई परिचालन गरिएको थियो । मलाई पनि अंचलाधीशबाट छुट्टै निर्दैशन आएको थियो ।
कुरा वि.स. २०३६ साल माघ महिना हो । म मुस्ताङ जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी थिएँ । तत्कालिन राजा बीरेन्द्रबाट जिल्लाको भ्रमण हुने जानकारी आयो । भ्रमण भने झारलको शिकारमा केन्द्रीत थियो ।
यो कार्यक्रमका लागि तत्कालिन वनमन्त्री स्वर्गीय प्रकाशबहादुर सिंहले नक्सालस्थित थापा परिवारका एक जना शिकारीलाई सर्वेक्षण गर्न पठाएका थिए । तत्कालिन धौलागिरीका अंचलाधीश स्वर्गीय लक्ष्यबहादुर गुरुङबाट प्रहरी र दुई गाउँ पञ्चायत लेते र ताङलुङका प्रधानपञ्चहरु क्रमशः भिमप्रसाद गौचन र प्रेम गौचनलाई परिचालन गरिएको थियो । मलाई पनि अंचलाधीशबाट छुट्टै निर्दैशन आएको थियो ।
कार्यक्रम अनुसार राजा बीरेन्द्रसहित दुई भाई ज्ञानेन्द्र र धिरेन्द्रको मुस्ताङको लेतेमा सवारी भयो । साथमा सरकारका उच्च सरकारी पदाधिकारी र चिकित्सहरु पनि आएका थिए । शिकार कार्यक्रमको व्यवस्थापनका लागि वनमन्त्री सिंह र अंचलाधीश गुरुङ दुई दिन अगावै आइपुगेका थिए ।
पहिलो दिन, खासै केही कार्यक्रम भएन । क्याम्पमै विश्राम गर्ने काम मात्र भयो । दोस्रो दिन, करिब विहान नौ बजे राजासहितको ठूलो टोली शिकारका लागि लेतेको उच्च पहाडी क्षेत्र तर्फ भयो । राजाको सवारी घोडामा भएको थियो । राजासहितको टोली विहान साढे १० बजेतिर लेतेको उच्च पहाडी क्षेत्रमा पुगेको थियो, जहाँको उचाई ८ हजार फिटभन्दा माथि रहेको थियो । त्यहाँ १ बजेपछि हिउँ पर्ने भएकाले शिकारको कार्यक्रम हुनसक्दैन थियो । टोली बिहान साढे १० बजे तिर नै त्यस क्षेत्रमा पुगे पनि कुनै ठाउँमा झारल देखिएन । यसरी पहिलो दिन बनमन्त्रीले रोजेको ठाउँमा राजाले शिकार गर्ने कार्यक्रम असफल भयो । त्यसैगरी अन्य तीन दिन अञ्चलाधीश र सेनाले शिकारका लागि राजालाई छुट्टाछुट्टै स्थानमा पुर्याए पनि कुनै दिन पनि शिकारको कार्यक्रम सफल हुन सकेन ।
अब राजाको पोखरा फिर्ती हुने विषयमा छलफल चल्न शुरु हुँदै थियो तर त्यही साँझ मैले राजालाई आफूले झारल प्रत्यक्ष रुपमा देखेको बिन्ति बिसाएँ । किनभने मैले १५ दिनअघि देखिनै स्थानीयको सहयोगमा झारल बस्ने स्थान र त्यसको हिड्ने बाटोको अध्ययन गरिसकेको थिएँ । राजाबाट मलाई ‘तिमीले आफैंले देखेको हो ?’ भनि सोधनी भयो । राजासँगको छलफलमा पहिले भएका कार्यक्रममा देखिएका कमीकमजोरीकाबारे बिन्ति चढाएँ । शिकार गर्न जाँदा लावालस्करसहित जान नहुने र शिकार गर्ने स्थानसम्म घोडा लग्न उचित नहुने लगायत कुराहरु राजा समक्ष सुझाएँ ।
त्यसपछि भोलीपल्ट राजासहित दुइ भाई र म गरी ४ जना हेलिकोप्टरबाट ताङलुङको पहाडी क्षेत्रमा अवतरण गर्यौं । त्यहाँ तीन वटा घोडाको व्यवस्था गरिएको थियो । यो हाम्रालागि वेश क्याम्प जस्तै थियो । करिब एक घण्टा घोडामा चढेर हिडेपछि हामी फेरि ओर्लिऔं र पेदल हिड्न थाल्यौं । आधा घण्टाको उकालो पैदल हिडेपछि फायरिङ गर्ने स्थानमा पुग्यौं ।
फाइरिङका लागि पहाडका ठूल्ठूला ढुंगामाथि गलैंचा विछ्याएको थियो । फायरिङ गर्नका लागि सहज होस भन्ने हेतुले गलैंचा विछ्याएको थियो । ताकी फाइरिङ गर्ने क्रममा छातीमा केही दखल नपुगोस् भनेर । हामी विहान करिब पौने ११ बजेतिर त्यहाँ पुगेका थियौं ।
हामी खोलाको वारितर्फ थियौं । पारी झारल हिड्ने ठाउँ थियो । स–साना बुट्यान र खोल्साहरुको बीचमा झारल हिड्ने बाटो थियो । अब झारल कतिबेला आउला भनि धैर्यतापूर्वक कुर्न सुरु गर्यौं । एक घण्टासम्म कुर्दापनि झारल देखिएन । अब केवल हामीसँग एक घण्टामात्र समय थियो । किनभने दिउसो १ बजेपछि उक्त स्थानमा हिउँ पथ्र्यो । अर्को आधा घण्टासम्म पनि झारलको कुनै अत्तोपत्तो देखिएन । साढे १२ बजे हुँदो हो पहाडको टुप्पोमा एउटा झारल देखियो । त्यसपछि अरु २ वटा पनि देखिए । उनीहरु खोलातर्फ ओरालो झर्न थाले । त्यही बेला मैले राजा बिरेन्द्रलाई सुट गर्नका लागि बिन्ती चढाएँ । तर त्यो ‘आउट अफ रेन्ज’ भएका कारण राजाले मलाई ‘डिस्टर्भ नगर’ भनेर हप्काइबक्स्यो । झारल ओरालो झर्दै थियो र त्यो राइफलको रेन्जमा थियो । त्यतिबेलै राजाबाट फाइरिङ भयो र झारल ठाउँको ठाउँ ढल्यो । त्यसपछि राजाले भाइ ज्ञानेन्द्रलाई फायर गर्न हुकुम भयो । ज्ञानेन्द्रको पनि निशाना पनि चुकेन । अर्को झारल ठाउँको ठाउँ ढल्यो । एवं प्रकारले अर्का भाई धिरेन्द्रलाई पनि फायर गर्न राजाबाट हुकुम भयो तर त्यो भने ‘मिस’ भयो ।
कार्यक्रम सफल भएपछि हामी अघिजसैगरी हेलिकोप्टरबाट लेतेमा रहेको क्याम्पमा आयौं । तर मलाई अचम्म लाग्छ, त्यो मारिएको झारलको मासु त के, रौं सम्म पनि हामीले देखेनौं । क्याम्पमा राति भब्य रात्रीभोजको आयोजना भयो । त्यसको भोलीपल्ट राजाको फिर्ती सवारी भयो ।
(श्रेष्ठ सरकारका पूर्वसचिव हुन् । यो लेख उनैसँगको कुराकानीमा आधारित रहेर तयार पारिएको हो ।)